भारतीय राजनीतिमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने विद्वान् नेता डा. सुब्रमन्ह्यम स्वामीको विचारमा ती मानिस राजनीतिमा सफल मानिन्छन् जो सधैँ कुनै न कुनै रूपले चर्चा (भूमिका) मा रहिरहन्छन् । पद प्राप्तिलाई सफलता र पद नपाउनुलाई असफलता ठान्नुहुँदैन, निरन्तर चर्चामा आइरहन सक्नु नै सफल राजनीतिकर्मीको विशेषता भन्ने उनको भनाइ हो ।
म्याकियाबेली या रुसोका परिभाषामा राजनीति साध्य प्राप्तिका प्रभावकारी साधन मानिए पनि प्लेटो र अरिस्टोटलहरूको विचारमा जनसेवाको निष्पक्ष एवम् निस्वार्थ कर्म हो राजनीति । प्लेटोले आदर्श राज्यको परिकल्पना जसरी गरेका छन् त्यसले राजनीतिप्रतिको उनको बुझाइ कति उच्च र भिन्न छ भन्ने दर्शाउँछ । तर, संसारका अधिकांश मुलुकमा राजनीति समाधानभन्दा पनि समस्याको मुख्य स्रोत बनेका छन् ।
ओशो रजनीशले राजनीतिकर्मी र राजनीतिबारे कुनै समय गरेका टिप्पणी नेपालको सन्दर्भमा यतिबेला ठ्याम्मै मिल्न आएको छ । बीपी कोइराला, राजा महेन्द्र, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी र टंकप्रसाद आचार्यजस्ता विचारनिष्ट नेतृत्व नेपालका निम्ति अब एउटा सपना मात्र मान्नुपर्ने स्थिति छ । चम्मु, चटके, चोर र चाटुकार प्रवृत्तिको घनत्व बढ्दै जाँदा नेपाली राजनीति तथा राजनीतिकर्मीहरूप्रतिको विश्वास र भरोसामा गम्भीर क्षति पुगेको छ ।
ओशो रजनीशको भनाइमा राजनीतिकर्मी भनेका रित्ता मानिस हुन् । पद नपाउन्जेल उनीहरू आफूलाई केही पनि ठान्दैनन् र, पद पाएपछि ‘म को हुँ देखाइदिन्छु’ भन्ने मनोदशामा बाँचेका हुन्छन् । जब पद प्राप्त हुन्छ, पदले निर्वाह गरेको भूमिकालाई उनीहरू आफ्नै भूमिका ठान्दछन् । आफैँलाई पद ठान्ने र पदले गरेको कामलाई समेत आफैँले गरेको भ्रममा राजनीतिकर्मी रहन्छन् भन्ने भनाइ आशो रजनीशको हो ।
काङ्ग्रेसलाई अहिले पनि गाली र आलोचनाका निम्ति केही हदसम्म योग्य ठानिँदै छ, त्यसैले घोचिँदै छ । देउवाले काङ्ग्रेसलाई यस्तो स्थितिमा नपु-याउन् जतिबेला गाली र आलोचनाको निम्ति पनि काङ्ग्रेस अयोग्य ठहर होस् । जस्तो अहिले प्रजापरिषद्लाई गाली गरिँदैन र चीनको कोमिन्ताङ पार्टी पनि आलोचना या गालीको निम्ति योग्य मानिँदैन ।
करको दर र दायरा बढाइँदा आमजनताको जीवन कष्टकर बनेको छ । कुनै बेला हिंसात्मक क्रियाकलापमा रहेका माओवादीहरूले चन्दा असुलेको शैलीमा अनेक आकारप्रकारका सरकारहरूले कर असुलिरहेका छन्, काङ्ग्रेस मौन । अनियन्त्रित बजारभाउले जनजीवन थप असहज बनाएको छ, काङ्ग्रेस मौन । यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट हटाउन खोज्दा पनि काङ्ग्रेस मौन र सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नखोज्दा पनि काङ्ग्रेस मौन ।
समयमै गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूलाई दण्डको भागीदार बनाउने कुरा अघि सारिँदा पनि काङ्ग्रेस मौन र, कामचोर ठेकेदारहरू कारबाहीमुक्त हुँदा पनि काङ्ग्रेस मौन ! गाउँगाउँका टोले सरकारहरू खर्च बढाउने, सर्वसाधारणलाई सताउने र स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने काम गरिरहँदा पनि काङ्ग्रेस मौन र तेल तथा तरकारीको भाउ हप्तैपिच्छे बढिरहँदा पनि काङ्ग्रेस मौन ! सुनकाण्डको पर्दाफास भएर तस्करीमा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया शुरु हुँदा मौन रहेको काङ्ग्रेस उक्त प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगीकन टुङ्ग्याइँदा पनि मौन छ । विपक्षीको भूमिका समेत माधव नेपाल, वामदेव गौतम र प्रचण्डहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने हो भने प्रतिपक्षी नेताका रूपमा कसैलाई तलब सुविधा र विशेष दर्जा दिएर पालनपोषण गर्नुको औचित्य के ?
काङ्ग्रेसलाई अहिले पनि गाली र आलोचनाका निम्ति केही हदसम्म योग्य ठानिँदै छ, त्यसैले घोचिँदै छ । देउवाले काङ्ग्रेसलाई यस्तो स्थितिमा नपुऱ्याउन् जतिबेला गाली र आलोचनाको निम्ति पनि काङ्ग्रेस अयोग्य ठहर होस् । जस्तो अहिले प्रजापरिषद्लाई गाली गरिँदैन र चीनको कोमिन्ताङ पार्टी पनि आलोचना या गालीको निम्ति योग्य मानिँदैन । गालीमुक्त हुन मर्नुपर्छ, मर्न नसके मरेतुल्य भए पनि आलोचनामुक्त हुन पाइएला, देउवा यसरी नै काङ्ग्रेसलाई मरेतुल्य बनाउँदै छन् ।
काङ्ग्रेसले उठाउनुपर्ने–सक्ने अनेक मुद्दा छन् । सरकारले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको स्थितिमा विपक्षले जनतामा आशा र जागरण पैदा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीका निम्ति उर्वर भूमि तयार भइरहँदा देउवाको काङ्ग्रेस पानी छर्केर ब्युँताउनुपर्ने गरी बेहोस छ ।
Posted on October 4, 2018 Author Categories विचार
Previous Previous post: भाडामा ठगिनुभएको छ ? सुरु भयो बढी लिनेमाथि अनुगमन
Next Next post: दुईतिहाइको ओली सरकार असफल ? चर्कंदो आन्तरिक अन्तर्विरोध, नागरिकमाथि महँगीको भारी…